Dingana dimy azonao atao anio mba hanamafisana ny varotra Amazon | Martech Zone
Dingana dimy azonao atao anio mba hampitomboana ny varotra Amazon
Alatsinainy 14 Febroary 2022 Alatsinainy 14 Febroary 2022 Mika Heath
Ny vanim-potoana fiantsenana vao haingana dia azo antoka fa tsy mahazatra. Nandritra ny areti-mifindra manan-tantara, nandao ny fivarotana biriky sy fako ireo mpividy, niaraka tamin'ny fifamoivoizana an-tongotra Black Friday. mianjera mihoatra ny 50% isan-taona. Mifanohitra amin'izany, nitombo ny varotra an-tserasera, indrindra ho an'ny Amazon. Amin'ny taona 2020, hoy ilay goavambe an-tserasera fa ireo mpivarotra tsy miankina amin'ny sehatra misy azy dia namindra entana $4.8 tapitrisa tamin'ny Black Friday sy Cyber ​​Monday — niakatra 60% tamin'ny taona lasa.
Na dia miverina amin'ny laoniny aza ny fiainana any Etazonia, dia tsy misy filazana fa hirohotra hiverina any amin'ny toeram-pivarotana lehibe sy fivarotana antsinjarany ny mpividy mba hahazoana traikefa. Azo inoana kokoa fa niova tanteraka ny fahazaran'ny mpanjifa, ary hitodika any amin'ny Amazon indray izy ireo amin'ny ankamaroan'ny fiantsenany. Rehefa manomboka manomana paikady amin'ity taona ity ireo mpivarotra na aiza na aiza, dia tsy maintsy mitana anjara toerana lehibe ity sehatra ity.
Zava-dehibe ny fivarotana amin'ny Amazon
Tamin'ny taon-dasa, mihoatra ny antsasaky ny varotra e-varotra rehetra no nandeha tamin'ny Amazon.
PYMNTS, Amazon ary Walmart dia saika mifamatotra amin'ny ampahany amin'ny varotra antsinjarany mandritra ny herintaona
Izany fanjakazakan'ny tsena izany dia midika fa tsy maintsy mijanona eo amin'ny lampihazo ireo mpivarotra an-tserasera mba hamerenana indray ny sasany amin'ireo fifamoivoizana (sy ny vola miditra) izay ho very raha tsy izany. Na izany aza, ny fivarotana amin'ny Amazon dia miaraka amin'ny vidiny sy ny aretin'andoha tsy manam-paharoa, manakana ny mpivarotra maro tsy hahita ny vokatra tadiaviny. Ny orinasa dia tokony hanana ny drafitry ny lalao ho vita mialoha mba hifaninana amin'ny tsenan'ny Amazon. Soa ihany fa misy dingana mivaingana azonao atao anio izay hampitombo ny varotra Amazon anao:
Dingana 1: Hatsarao ny fanatrehanao
Ny toerana tsara hanombohana ity tetikasa ity dia ny famelana ny vokatrao hamirapiratra. Raha mbola tsy nanangana ny fivarotanao Amazon ianao dia dingana voalohany tena ilaina izany. Ny fivarotanao Amazon dia vohikala kely ao anatin'ny ekôsistema midadasika kokoa an'i Amazon izay ahafahanao mampiseho ny vokatrao manontolo ary mahazo fahafahana mivarotra sy mivarotra vaovao miaraka amin'ireo mpampiasa mahita ny marikao. Amin'ny fananganana ny tranokalanao Amazon, dia ho vonona ihany koa ianao hanararaotra ireo vokatra sy endri-javatra vaovao rehefa mivoaka izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, tokony hifantoka amin'ny fanavaozana na fampiharana ny atiny A+ ho an'ny lisitry ny Amazon rehetra ianao, izay endri-javatra mavesatra amin'ny pejy momba ny vokatra. Ny vokatrao dia hahasarika ny maso miaraka amin'ny atiny A+ eo amin'ny toerany ary hanana fahatsapana marika tsy miovaova. Ho hitanao ihany koa ny fiakaran'ny tahan'ny fiovam-po izay mahatonga ny ezaka fanampiny mendrika ny fotoananao.
Dingana 2: Ataovy azo antoka kokoa ny vokatrao
Na dia tena zava-dehibe aza ny fanaovana ny vokatrao ho mahasarika, dia te-hahazo antoka ihany koa ianao fa azo amidy kokoa ho an'ny mpampiasa Amazon ny vokatrao. Mba hanaovana izany, jereo fanindroany ny fomba nanakambananao ny vokatrao.
Ny mpivarotra Amazon sasany dia misafidy ny hanao lisitra ireo vokatra manana endri-javatra samihafa (milaza ny loko na ny habeny) ho toy ny vokatra tsirairay. Noho izany, ny ambony tanky maitso kely amidinao dia vokatra hafa noho ny ambony tanky mitovy habe lehibe na loko mena. Misy tombony amin'ity fomba fiasa ity, saingy tsy dia mora ampiasaina. Andramo kosa ny mampiasa ny endri-javatra ifandraisan'ny ray aman-dreny mba hanangonana vokatra miaraka, mba ho azo jerena izy ireo. Amin'izany fomba izany, rehefa hitan'ny mpampiasa iray ny tampony tanky, dia afaka mifamadika mora foana eo amin'ny loko sy habe misy eo amin'ny pejy iray izy mandra-pahitany izay tadiaviny.
Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny lisitry ny vokatrao mba hanamafisana ny fomba hisehoan'izy ireo amin'ny valin'ny fikarohana. Tsy hampiseho vokatra i Amazon raha tsy misy ny teny fikarohana rehetra ao amin'ny lisitry ny vokatra. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, tokony hampidirinao ny zavatra rehetra fantatrao momba ny vokatrao sy ny endri-javatra misy azy, miaraka amin'ny teny fikarohana mifandraika amin'izany, mba hanatsarana ny lohatenin'ny vokatrao, ny teny fanalahidy backend, ny famaritana ary ny bala. Amin'izany fomba izany, ny vokatrao dia mety hiseho kokoa amin'ny fikarohana. Ity misy toro-hevitra avy amin'ny olona iray: ny fiovan'ny olona momba ny vokatrao arakaraka ny vanim-potoana. Noho izany, aza hadino ny manavao ny lisitrao mba hanararaotra ny fironana ara-potoana.
Dingana 3: Atombohy ny fitsapana fitaovana fanaovana dokambarotra vaovao
Rehefa avy nanatsara ny vokatrao ianao dia atombohy ny andramana ireo vokatra sy endri-javatra doka vaovao mba hametrahana azy ireo eo anoloan'ireo mpividy mifandraika amin'izany. Ohatra, azonao atao izao ny mampiasa doka fampiratiana tohanan'ny mpanentana mba hikendry mpihaino mifototra amin'ny angon-drakitra fividianany. Ireo doka ireo dia miseho amin'ny pejy antsipirihan'ny vokatra mba hahafahanao mifaninana mivantana amin'ny vokatra mitovy, ary afaka miseho ao amin'ny pejy fandraisana Amazon ihany koa izy ireo. Ny tombony lehibe ho an'ireo doka ireo dia ny asongadina ao amin'ny Amazon Display Network, izay doka manaraka ny mpampiasa amin'ny Internet.
Vao haingana ihany koa i Amazon dia namoaka doka horonan-tsarimihetsika marika mpanohana. Ity vondrona doka vaovao ity dia tena mampientam-po satria ny ankamaroan'ny mpampiasa Amazon dia mbola tsy nahita horonantsary nipoitra mihitsy teo aloha, ka mahatonga azy ireo ho tena manintona. Manolotra fametrahana pejy voalohany ihany koa izy ireo, izay zava-dehibe rehefa mandinika izany Ny 40% amin'ny mpividy dia tsy mandeha amin'ny pejy voalohany misokatra izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia vitsy ny olona mampiasa ireo doka ireo, noho izany dia ambany dia ambany ny vidin'ny klioba.
Dingana 4: Mametraha fampiroboroboana ara-potoana
Ny fampiroboroboana tsara dia mety ho ny fahasamihafana amin'ny famadihana ny fifamoivoizana ateraky ny doka ho fiovam-po. Raha hanolotra fampiroboroboana ianao dia tena ilaina ny manidy ireo antsipirian-javatra ireo aloha satria mila fampitandremana mialoha ny Amazon mba hametrahana azy ireo ara-potoana… indrindra ho an'ny Black Friday sy Cyber ​​5. Ny fampiroboroboana dia zavatra sarotra ary tsy mety amin'ny tsirairay. orinasa na vokatra. Na izany aza, ny paikadin'ny fampiroboroboana Amazon iray mahomby dia ny famoronana fehezam-boninkazo virtoaly izay mampifandray ireo vokatra mifandraika. Ity paikady ity dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fivarotana sy fivarotana entana mitovitovy amin'izany, fa azonao ampiasaina ihany koa mba hampitomboana ny fahitana ireo vokatra vaovao izay tsy milahatra tsara.
Dingana 5: Tadiavo ny Amazon Posts
Ny dingana farany azonao atao mba hahazoana mitsambikina amin'ny varotra Amazon dia ny fananganana ny anao Amazon Lahatsoratra fanatrehana. Ny orinasa dia mitady fomba vaovao hitazomana ireo mpampiasa ao amin'ny tranokala ho ela kokoa, noho izany dia nanomboka nanandrana ny lafiny sosialy amin'ny fiantsenana. Ny marika dia manangana pejy ary mandefa betsaka toy ny ataony amin'ny sehatra media sosialy hafa. Afaka manaraka ny marika tiany ihany koa ny mpampiasa.
Ny tena mampientanentana ny Amazon Posts dia ny fisehoany amin'ny pejy antsipirihan'ny vokatra sy ny pejin'ny vokatra mpifaninana. Ity fahitana ity dia mahatonga azy ireo ho fitaovana tsara hahazoana fampirantiana fanampiny amin'ny marika sy ny vokatrao. Amin'ny volana mialohan'ny fisondrotanao, andramo andramo sary sy hafatra samihafa hahitana hoe inona no manaitra. Afaka manomboka ity dingana ity haingana sy mahomby ianao amin'ny alàlan'ny fanodinana ireo lahatsoratra efa ampiasainao ao amin'ny Instagram sy Facebook.
Mahomby amin'ny Amazon
Enga anie isika rehetra hifaly amin'ity taona ity ho afaka amin'ny tebiteby sy ny tsy fahatokisana izay niainantsika tamin'ny taon-dasa. Na izany aza, na inona na inona mitranga, dia fantatsika fa ny mpanjifa dia hitodika hatrany amin'ny Amazon noho ny fiantsenany. Izany no antony tokony hametrahanao ity sehatra ity eo anoloana sy afovoany rehefa manomboka mamolavola ny paikadin'ny fampiroboroboanao ianao. Amin'ny fanatanterahana asa stratejika izao, dia ho eo amin'ny toerana tsara hahitanao ny vanim-potoana mahomby indrindra amin'ny Amazon ianao.
Tags: doka amazondokambarotra amazonaamazon postAmazon promotionsvarotra amazonahampitombo ny varotra seocyber mondaye-varotrapymnts
Micah Heath dia talen'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra ao amin'ny Toerana lojika, orinasa Inc. 500 manana foibe any Oregon manana birao manerana ny firenena. Ny masoivoho dia manolotra vahaolana feno amin'ny fitantanana PPC, SEO, ary famolavolana tranokala ho an'ny orinasa lehibe sy kely, ary nomena toerana fahatelo tsara indrindra hiasa any Amerika avy amin'ny Inc. Magazine.
Inona no atao hoe CRM? Inona avy ireo soa azo amin'ny fampiasana ny iray?
Sellics Benchmarker: Ahoana ny fomba hanoratana ny kaontinao amin'ny dokam-barotra Amazon